China i-100% yeCarbon fiber telescopic pole abavelisi beepali kunye nabathengisi | ILanbao
Le ntonga yeteleskopu yenziwe nge-100% yefayibha yekhabhoni yokuqina okuphezulu, ubunzima bokukhanya, ukunxiba kunye nokumelana nomhlwa. Intonga ye-telescopic inamacandelo amathathu, kwaye uyilo oluguquguqukayo lwesitshixo luvumela umsebenzisi ukuba ahlengahlengise ubude ngokukhululekileyo.
Ezi zibambo zecarbon fiber zilula zityibilika ngaphandle kokusebenza kwaye zinokutshixwa nangaluphi na ubude ukusuka kwi-110cm ukuya kwi-300cm, ezilungele nasiphi na isicelo apho ukugcinwa kobumbano kunye nobude obude obude kufuneka. Ezi zibonda kulula ukuzisebenzisa nokuziphatha. Ziyakwandiswa ziye kubude obuphezulu ngemizuzwana ngokukhupha kunye nokutshixa icandelo ngalinye le-telescoping.
Le ntonga yeteleskopu inokusetyenziswa emakhayeni ukucoca iiWindows kunye nokucoca iipaneli zelanga. Intonga ebuyiselwayo ibonelela ngokucoceka kude. Uyilo lwe-Ergonomic lwenza ukucoca umgama omde ngakumbi okonga abasebenzi kunye nokukhuseleka.
Sineqela leenjineli ezineminyaka eli-15 yamava kushishino lwekhabhoni yefayibha. Njengomzi-mveliso oneminyaka eli-12 ubudala, siqinisekisa ukuhlolwa okungqongqo komgangatho wangaphakathi, kwaye ukuba kukho imfuneko, sinako ukubonelela nokuhlolwa komgangatho weqela lesithathu. Zonke iinkqubo zethu zenziwa ngokungqinelana ngokungqongqo ne-ISO 9001. Iqela lethu liyazingca ngeenkonzo zethu ezinyanisekileyo nezisesikweni, kwaye lihlala lihambisa eyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi.
Igama I-100% yeCarbon fiber telescopic pole pole multifunction pole
Uphawu lwezixhobo 1. Yenziwe ngeemodyuli eziphezulu ze-100% zekhabhoni engeniswe eJapan nge-epoxy resin
2. Utshintsho olukhulu lweetyhubhu ezinamaphiko ealuminium ephantsi
3. Ubunzima bu-1/5 bentsimbi kunye namaxesha ama-5 omelele kunentsimbi
4. Ukusebenza ngokuNobuncinci koLwandiso lweThermal, Ukuchasana kobushushu obuphezulu
5. Ukuzimisela okuhle, ukuqaqamba okuhle, ukuLungeleka okuPhantsi koLwandiso lweThermal
Ukucaciswa Umzekelo I-Twill, iThafa
Umphezulu Kuyacwebezela, Matte
Umgca 3K Okanye 1K, 1.5K, 6K
Umbala Mnyama, iGolide, isilivere, Bomvu, Bue, Gree (Okanye ngombala weSilika)
Izinto eziphathekayo I-Japan iTayay Carbon Fibre yengubo + nentlaka
Umxholo weCarbon 100%
Ubungakanani Chwetheza Isazisi Ubungakanani bodonga Ubude
Ipali telescopic 6-60 mm 0.5,0.75,1 / 1.5,2,3,4 mm I-10Ft-72ft
Ukusetyenziswa 1. I-Aerospace, ii-Helicopter Model Drone, i-UAV, i-FPV, kunye ne-RC Model Parts
2. Ukucoca Isixhobo, Ukucoca amakhaya, Ukuphuma ngaphandle, Ipali yekhamera, isikhethi
Ukupakisha Iingqimba ezi-3 zokupakisha ezikhuselayo: ifilimu yeplastiki, isongelo sebhola, ibhokisi
(Ubungakanani obuqhelekileyo: 0.1 * 0.1 * 1 mitha (ububanzi * ubude * ubude)
Ngomgangatho wokutshixa osemgangathweni kunye nentambo yendalo iphela, ezi zibonda zisebenza kunye nazo zonke iziqhoboshelo ze-Unger kunye nazo naziphi na izinamathiselo ezinomsonto wehlabathi. Xa uqhagamshela i-squeegee, isikhafu, ibrashi okanye idasta kwenye yeepali zethu zeteleskopu, unokucoca iindawo ekunzima ukufikelela kuzo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo kunokucoca ngesixhobo esiphathwayo nelaleli. Nanini na xa kukho imfuneko yokufikelela okude, nokuba kungaphakathi okanye ngaphandle.
Egqithileyo 45Ft izinto zeHybrid zeepali zeteleskopu
Okulandelayo: Ityhubhu yeCarbon fiber enobude obahlukeneyo, ubude bunokwenziwa ngokwezifiso
Ipali yeFiberglass Telescopic
Iglasi yefayibha yeglasi yefayibha
Telescopic Window Ukucoca Pole